Icho Chaicho Chikonzero Chekuhaya Social Media Guru | Martech Zone
Svondo, Gunyana 26, 2010 Muvhuro, April 20, 2015 Douglas Karr
Kwemakore gumi apfuura, ndakashanda nesimba kuti ndivake online online, chiremera, uye pakupedzisira kubudirira bhizimisi. Zvino, ndakatarisana nevanhu vanoshuvira kuhaya masevhisi angu kuitira kuti ndivabatsire kuita zvakafanana. Dzimwe nguva ikambani huru ine tarenda risingadaviriki uye ndinokwanisa kuendesa. Dzimwe nguva handizvo uye ini ndinopa rakasiyana sevhisi.
Kuburikidza nemakore aya, ndakaona vamwe vachindipfuura online uye vakadzidza zvakawanda. Ini ndakakundawo vamwe vakawanda… vashoma kwazvo vane bhuku rakaburitswa kana bhizinesi ravo pachavo rakanangana nehunyanzvi hwavo. Izvo zvakapihwa ini nekunzwisisa pane izvo zvinoshanda, chii chisingashande, ndeapi masimendi anogona kusvetukira simba rako, pamwe neizvo chaizvo zvinogona kukuvadza kwazviri.
Nekudaro, ruzivo rwese irworwo harusi icho chikonzero chaicho chaungade kundiroja. Ruzivo irwo ruri kunze uko… zviri online kuburikidza nemablog angu zvinyorwa, zvangu bhizinesi blogging bhuku, uye mharidzo dzangu. Kana iwe uchinditevera, kana chero chimwe zvacho chinonzi pasocial media gurus, vanenge vese vanoisa ruzivo kunze uko mahara. Chokwadi - vazhinji vanopa yakaderedzwa mikana yekudzidzira kuti vawane kosi yekuparara (ndicho chikonzero chikuru chekutitarisa tichitaura)… asi poindi ndeyekuti iwe waigona kuitora usina kutiroja.
Izvo iwe zvausingakwanise kuwana mahara isimba redu. Zvemagariro midhiya gurus zvine hukuru hunotevera - kazhinji mukati meNice niche. Yangu niche kushambadzira kwepamhepo, kushambadzira kwakawanda uye kusanganisa kutsvaga, zvemagariro uye mamwe matekinoroji epamhepo ekuvaka bhizinesi. Ndichiri kubvunza nemakambani mazhinji pazvinhu izvi - mamwe makambani akaisa mari mumasevhisi angu ari kutsvaga chimwe chakasiyana kwazvo…
Vari kutsvaga yangu endorsement saka vanogona kuvaka chiremera nekukurumidza… pamwe ne kuwana kune vateereri vangu.
Fans, vateveri, vaverengi uye vanyoreri chinhu chakakosha nhasi ... kunyanya kana uchikwanisa kuenderera uchikura izvo zvinotevera. Vamwe vanhu vanondikumbira kuti nditaure nekuti vaona uye vanakidzwa nemharidzo dzangu - asi vamwe vazhinji vanondikumbira kuti nditaure nekuti vanoziva kuti ini ndinosimudzira bhizinesi ravo kana musangano wavo kuvateereri vangu. Kana ndikataura - ini ndinoda kuti chive chiitiko chikuru… chakatengeswa ne buzz paInternet yese. Mukutendeseka kwese, pane mukana mushoma wekuti ini ndichasimudzira chiitiko chandisiri kutora chikamu ... Ini handingofarire nezvavo zvakakwana kuti ndivasimudzire nemoyo wese ... uye vateereri vangu vanogona kutaura.
Izvo zvakati, ini ndinotora angu ekutaura mikana uye zvibvumirano zvakakomba. Ini handingokanda chibvumirano kunze kwekutenda kwazvinobva - kunyangwe kana ndiri kubhadharwa kuti ndiite saizvozvo. Ini ndinoshanda nemakambani mazhinji andisati ndambotaura nezvepamhepo. Hazvirevi kuti handitendi ivo vakakodzera, ndezvekuti zvingave zvisina basa kutaura nezvavo kune vateereri vangu. Sumo yaizotarisa kunze kwenzvimbo nekumanikidzwa.
Ndiri kushamiswa nenhamba ye pasocial media gurus iyo inopa yakabhadharwa machira, akabhadhara maTweets uye akabhadharwa endorsements pasina kuona kuti vari kupa kukosha kune vateereri vavo. Ivo vanoisa cheesy mapikicha navo vakamira padyo nemumwe munhu akakosha kuti neimwe nzira vape pfungwa yekuti vanofanirwa kuve vakakosha… ona pikicha pamusoro;).
Ini ndinoita kuyedza kwese kudzivirira aya matekiniki… chingave chituko kune vateereri vandakashanda zvakaoma kuvaka uye pakupedzisira kuzviisa panjodzi Ini ndinofunga iri zano renguva pfupi-kuti uwane mari mukati - uye inozvidza vateereri vavo nekufamba kwenguva. Mazhinji eiyo ita mari online gurus Ita izvi. Ivo vanofanirwa kubiridzira uye kutenga endorsements kungoenderana neakafemerwa persona yavakagadzira online. Vateereri vavo vanouya uye vanoenda sezvavanowana kuti vanyengedzwa.
Kana iwe uchinyatsoda huru online kuvepo uye kuwana kune vateereri ve pasocial media guru, nzira dziri nyore dzekuita izvi kuhaya hombe pasocial media guru izvo zvine zvinotevera zvaunoshuvira kuwana uye nekuvaka masimba nazvo. Pasi pemirairidzo yeFTC, ini ndichagara ndichitaura kuti ivo mutengi kana kuti ndiri kupihwa mubhadharo wekubvumidzwa kwangu. Nekuti ini ndanga ndakangwarira kuti ndisa pimp kunze kwevateereri vangu kune chero munhu anoda kundikandira mari, vateereri vangu havana basa kuti ini ndakabhadharwa nezvayo. Ivo vasvika pakuziva kuti kunyangwe yangu mvumo yekubhadharwa ichagara ichipa kukosha.
Kuhaya guru rezvemagariro venhau kunogona kukupa ruzivo rwakakosha uye kubvunza izvo zvinobatsira kutyaira bhizinesi rako ... asi chikonzero chaicho chekuhaya mumwe chiri kuwana mukana kune vateereri vavo uye chiremera kuburikidza nemvumo. Pasina iyo, une mugwagwa wakareba pamberi pako. Nayo, iwe unogona kusvetuka yako yemagariro midhiya kuvepo uye pamhepo chiremera.
Tags: douglas karrseth godinpasocial media guru
Wakaisa Maparamende muWebmasters?